Ny baolina kitra tsara indrindra miaraka amin'ny FIFA 16 Ultimate Team | Androidsis
Ekipa Fifa 16 Ultimate, angamba ny lalao baolina kitra tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Izahay indray alohan'ny a fanontana vaovao an'ny FIFA malaza ao amin'ny kinova Android izay miaraka amin'ny tsindry sy tanjaka ilaina mba handefasana ny tifitra tsara indrindra ary hamonoana ny tanjona tsara indrindra hahatongavana ho kintana soccer amin'ity vanim-potoana ity. Efa natomboka ny ligy ary ireo lalao ligin'ny Champions League izay hianjera rehefa mandeha ny herinandro sy volana dia efa azontsika atao ny maka tahaka ny mpilalao tsara indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny lalaon'izy ireo ary mitarika ekipa iray amin'ny fandresena farany.
Amin'ity FIFA ity dia mila mitady azy isika mandresy lalao maro araka izay azo atao, mba hahazoana vola ampy hividianana karatra amin'ireo mpilalao malaza azontsika ampidirina ao amin'ny ekipanay. Izany dia hiteraka fahaizantsika miatrika ny tsara indrindra ary tsy mila mijery ireo kintan'ny baolina kitra mandresy antsika amin'ireo ekipa mpanohitra.
1 Sary mahavariana
2 Tsy ny rehetra no ho tonga lafatra
Amin'ity voalaza ity mialoha, raha miroso amin'ny fahitana sary miavaka isika, ny tontolon'ny baolina kitra dia voaravaka tamin'ny fomba tsara indrindra amin'ity FIFA 2016 vaovao ity miaraka amina sary mihetsika sy mekanika lalao miendrika konsol. Azonao atao ny mamerina mamokatra ny lalao tsara indrindra an'ny mpilalao baolina tianao amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlan'ny Lalao EA.
FIFA 2016 Ultimate Team dia misy Mpilalao 10.000 tena izy avy amin'ny ekipa 500 an'izao tontolo izao. Mba hampivoarana tsara kokoa ny zava-drehetra dia nisy motera lalao vaovao nampidirina mba hahagaga antsika amin'ny zavatra azo tratrarina, amin'ny resaka gameplay, miaraka amin'ny lalao ho an'ny fitaovana finday toy ny iray miaraka amin'ny Android.
Ary sambany dia manana ny Lalao EA anisan'izany ny fankalazana tanjona amin'ny lalao video ho an'ny telefaona finday, izay azo antoka fa azo vidiana aza ny sasany satria miatrika lalao miloka betsaka amin'ny maodelim-freemium isika.
Tsy ny rehetra no ho tonga lafatra
Ireo sary sy ireo lalao fomba fampiononana ireo dia mampivoatra ny filàna manana finday avo lenta mahery vaika. Ny lalao EA dia manasa ny tanany tanisa vitsivitsy, fa raha manana processeur tsara kosa ny anao dia aza manahy momba azy satria azo antoka fa afaka mankafy azy ianao.
Mazava ho azy fa mandehana miomana 1,4 GB ho an'ny fametrahana, satria ireo firafitra sy sary mihetsika rehetra ireo dia mitondra fahatsiarovana anaty be dia be izay ho entina mandroso. Ary ho an'ilay ampahany manohina ny maodelin'ny Freemium, isaky ny lalao mandresy dia homeny anao eo anelanelan'ny vola madinika 15 sy 150 ary ho an'ny mpilalao manana statistika tsara, manisa 2100 hividianana azy. Tsy manisa izay mety ho vidin'ny iray toa an'i Agüero izahay, fa efa afaka manome kajy eo ho eo ny isan'ny fandresena tokony ho azonao any an-damosinao hahazoana izany.
Un lalao mahafinaritra raha resaka teknika no resahina, saingy mitondra antsika amin'ny FIFA miaraka amina maodely freemium manao ny zavatra izy, koa aza mieritreritra fa ho afaka hivoaka betsaka amin'izany ianao. Amin'ity voalaza ity dia tsy fantatro raha te hahaliana ny Lalao EA ny hampifandraisina amin'ny FIFA amin'ny maodely freemium izay afaka miala amin'ilay halo majika ananany ao amin'ny kinova console.
Ampirisihina mafy Ary raha misy antony hafa tadiavinao lalao baolina kitra hafa saingy miaraka amina fomba hafa dia mijanona Tiki Taka Soccer.
Ny fivoarany ara-teknika mahatalanjona
Mpilalao an'arivony sy ekipa an-jatony
Masinina sary aupa
Modely freemium be loatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ekipa Fifa 16 Ultimate, angamba ny lalao baolina kitra tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Spizzirri dia hoy izy:
Marina daholo izay lazainao fa mandany bateria be dia be. Kaontera hitako io. Ankoatr'izay dia tsy afaka milalao ligy tsy miankina amin'ny console aho. TIpo milalao ny ligy voalohany na zavatra mitovy amin'izany.
Valiny tamin'i Spizzirri
Tonga Arsene Wenger ao amin'ny Champ Man 16
Ahoana ny fomba hanovana habe ny sary amin'ny Android